UMfu Ntshangase uthe njengoba le nhlangano iphekela abantwana ababhalise ngaphansi kwayo nabantwana bomphakathi, kubuye kube nzima ngezinye izinsuku njengoba bebuye bephelelwe ukudla.
Uqhube wathi njengoba engumfundisi webandla lase-zion elibizwa ngokuthi yi-Enhlanhleni Phillipian Church, ukholelwa ukusizeni abantu, ngakho kwabonakala kukuhle ukuthi ibandla liqale le nhlangano emva kokuba kutholwe ukuthi izingane ezikusonto skole ziqhamuka emakhaya ampofu. “Le nhlangano iqale ngo-2002 emva kokuba sibone izingane zika sonto skole ziphuma emakhaya antulayo. Iningi lalezi zingane zihlukumezekile ngenzindlela ezahlukahlukene, ezinye ziyizi ntanda kuthi ezinye zinesifo zesandulela ngculazi.”
Uthe: “Ngaphandle kokuphekela lezingane silekelela lezo ezidla imishwanguzo, sizifundisa ngokuthi kungani zidla imishwanguzo nokuthi isiza kuphi ngoba iningi lezingane ziyafihlelwa emakhaya ukuthi zinesifo sesandulela ngculazi.
Sike sicele amalungu omphakathi anezingubo angazisebenzisi ukuthi banikele ngazo ukuze sinike labantwana. “Kwesinye isikhathi uthola ukuthi abazali bala bantwana bayagula iningi labo alisakwazi nokuzenzela lutho ngakho siyababheka emakhaya lokhu okwaziwa ngokuthi ama-home visits sifike sibageze sibaphe amaphilisi bese sibapha ukudla. Uma bengasitholi isibonelelo sika hulumeni siphinde siba size njengoba sisebenzisana noMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi.”
Uqhube wathi isifiso sakhe wukuthi bekwazi ukuphekela abantwana nomphakathi zinsuku zonke kodwa lokhu kungenzeka uma nje kungase kube khona umSamariya olungileyo onganikela ngamaphasela okudla.
Uthe le nhlangano ilekelela nabantu abadala abaphila nesifo sesandulela ngculazi. Bayabalekelela ngokuthola imishwaguzo bese bebaluleka ngaso lesi sifo.
“Emva kokuba sibone ukuthi sebeluleme sibafundisa ukutshala engadini nokwenza ubuhlalu ukuze bedayisele umphakathi bethole imali yokuziphilisa bona nemindeni yabo. Okunye esikuhlelayo wukuthi sibafundise ukuthunga, kodwa asinayo imishini yokuthunga ukuze siqale ama klasi. Siphinde sibe nama volontiya aluleka abesifazane abadlwenguliwe, njengoba kukhona nogogo abahlala nabazukulu abadla izidakamizwa ezingekho emthethweni bagcina sebedlwengule ogogo emakhaya, labo gogo siyabasiza kule nhlangano sibaluleke bese kulabo abadinga umatikuletsheni siyabasiza njegoba sinamaklasi angena ebusuku”
“Nginxuse umphakathi, osomabhizinisi nabanye, ukuthi basixhase ngezitsha nezipuni zokudla, imifaniswano nezicathulo zesikole, izingubo zokugqoka, amaphasela okudla nanoma yini umuntu afisa ukusixhasa ngayo sizokwamukela ngezandla ezimhlophe.” Uma kukhona othanda ukuxhasa le nhlangano angashayela uMfu Ntshangase enombolweni ethi: 082 666 0876 noma kwi kheli le email elithi: enhlanhleni@gmail.com